Posted by PhyoPhyo at Saturday, October 31, 2020 Labels: အထွေထွေ
ပြတိုက်ရှေ့နားက Serbian sculptor MATIJA VUKOVIC ရဲ့ The miner ဆိုတဲ့ ပန်းပုရုပ်
ဆောင်းဦးဝင်လာပြီဆိုတော့ အအေးတော့ပိုလာပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ဆောင်းလို အေးအေးစက်စက်ရာသီဥတုမျိုးတော့ မဟုတ်သေးဘူးပေါ့။ ဘဲလ်ဂရိတ်မြို့ Museum of Contemporary Art ရှေ့မှာ Performance ပွဲတစ်ခုရှိမယ်တဲ့။ ကဗျာနည်းနည်းရွတ်ကြမယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ကိုကြောက်နေကြရတော့ ပြတိုက်အတွင်းပိုင်းအခန်းတွေမှာလုပ်ဖို့က နည်းနည်းအန္တရာယ်များမှာ၊ အဲဒါကြောင့် ပြတိုက်ရှေ့ မြက်ခင်းပြင်မှာလုပ်ကြရတယ်တဲ့။ သူက ကြည့်ချင်တော့ သွားဖြစ်ကြတယ်။ အပြင်သိပ်မထွက်ဖြစ်တော့ ဆောင်းဦးမှာ အရောင်တွေပြောင်းလဲလာကြတဲ့ သစ်ရွက်ညိုညို၊ သစ်ရွက်ဝါဝါတွေနဲ့ နွေလက်ကျန် သစ်ရွက်စိမ်းစိမ်းတွေဟာ ကျမအတွက်တော့ ကြည့်ရတာ သိပ်လှတာပဲ။ ကျမကတော့ performance လုပ်နေတဲ့သူတွေဆီ အာရုံမရောက်ပါဘူး။ အရောင်စုံသစ်ရွက်တွေကိုပဲ အငမ်းမရ လိုက်လိုက်ကြည့်မိတယ်။ မိုးအုံ့နေပေမဲ့ ခပ်ဖွဖွတိုက်နေတဲ့ လေက မအေးလှပါဘူး။
Posted by PhyoPhyo at Tuesday, December 24, 2019 Labels: သိပ်ကြိုက်တဲ့သီချင်းတွေ
ခရစ်စမတ်ဟာ ဖြူမွမွနှင်းတွေမရှိတော့ မပြည့်စုံသလိုပဲ
နှင်းတွေမရှိလည်း ခရစ်စမတ်ကတော့ ရောက်လာမြဲပါ။
နှင်းတွေမရှိလည်း "so this is christmas what have you done" ဆိုတဲ့ Lennon ရဲ့သီချင်းလေးနားထောင်ဖြစ်မြဲ၊ war is over စာသားလေးတွေလိုက်နားထောင်မိရင်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ရမြဲ၊
Mary's boy Child သီချင်း၊ ခရစ်စမတ်သီချင်းတွေနားထောင်ရင်း ခရစ်စမတ်ခံစားမှုလေးတော့ရမြဲ၊
ဒီလိုခံစားမှုလေးတွေနဲ့ပဲ နှစ်တစ်နှစ်၊ နှစ်အသစ်တစ်ခုကိုကြိုဆိုရဦးမယ်။
Posted by PhyoPhyo at Sunday, December 01, 2019 Labels: သိပ်ကြိုက်တဲ့သီချင်းတွေ
I wish you all to be sweet in Sweet December.
But for me December is not so sweet. Father, sister ... they run away from us.
But I tried... I am trying... I will try to be sweet all time, (memories) that I face.
I love to be sweet. (but I don't love to eat sweet. 😉😉)
ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ကိုယ့်ဘာသာမကြိုက်တာတွေ သိပ်ကိုများခဲ့တာပဲ။
အခုတော့ ကိုယ့်ဘာသာ ကြိုက်လာပါပြီ။ ချစ်တတ်လာပါပြီ။
ကိုယ့်ဘာသာကြိုက်တာတွေ သိပ်များလာခဲ့ပြီလို့တောင် ပြောလို့ရသွားပြီ။
(မေမေပို့ပေးတဲ့ စာကို မေမေပို့ပေးတဲ့ နှင်းဆီလေးတွေနဲ့ပဲ အတူတွဲထားလိုက်တယ်) ပါရဂူရေးတဲ့ “ဓမ္မ၀တ္ထုတိုများ" စာအုပ် ဒီကနေ့ မေမေ၀ယ်လာလ...
မဟာ ပိန်းနဲရယ်နဲ့ နတ်ပွဲ ..အလီလီ.. အော် .နတ်တော်လမှာတော့ ..ပျော်ကြ. ပါးကြသည်….. ဘာလိုလိုနဲ့ နတ်တော်လကို ရောက်ခဲ့ပြန်ပြီ။ဖြိုးဖြိုး...
စွန့်စားခန်းတွေအကြောင်း သဘောကျတတ်တဲ့ကျွန်မအတွက် စွန့်စားခန်းတစ်ခု ရင်ဆိုင်ရဖို့ ကြုံလာတယ်။ ဟုတ်တယ်... အဲဒီစွန့်စားခန်းက သူများတွေအတွက် ရယ...
(Mirror Magazine, December, 2013) ဟော ... “ ------” “ ****** ” မျက်နှာချင်းဆိုင်အခန်းက တံခါးပိတ်သံ၊ စကားပြောသံတွေကြားရသည်။ ရုံး...
photo from Living Fashion Magazine Facebook ထန်းစန်းလိုဏ်ဂူဘုရားကိုဖူးမြော်ဖို့ အရောက် လှမ်းကြခဲ့ကြပါလို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ ထန်းစန်းဂူဆိုတာ...
Loft ထပ်ခိုး ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းဟာ အပေါ်ထပ် ဒါမှမဟုတ် အမိုးအောက်ကနေရာလေးကိုဖော်ပြဖို့ ယေဘူယျအသုံးပြုကြတယ်။ တခြားစကားလုံးနဲ့တော့ အမိုးအောက်...
♫ The trees that whisper in the evening Carried away byamoonlight shadow ♫ လရောင်ရှိတဲ့ညတွေမှာ လရောင်ခပ်လဲ့လဲ့လေးဖြာကျတဲ့နေရာမှာအိပ်ရ...